बिपी र चाउ एन लाइसँग फेवामा नौकाविहार - म्यागेजिन - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइको हात नरम, बोली कडा
वाशुदेव मिश्र पोखरा १ असार
पोखरा फेवा किनारमा ढाका टोपी लगाएका बिपी र दायाँपट्टी माला पहिरिएका चाउ एन लाइ (अप्रिल १९६०)
पहिलो भ्रमणमै चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइ पोखरा आउने भएपछि फेवातालमा नौकाविहार गराउनै पर्यो। ठूलो फलेक राखेर दुईवटा डुङ्गा जोडियो। डुङ्गामा कार्पेट बिच्छ्याइयो।
‘विमानस्थलमा हामीले उनलाई फूलमालाले स्वागत गर्यौं, लगत्तै उनी आर्मीको गाडीमा रत्नमन्दिर गए’, लीलाभक्त आचार्यले ती दिन सम्झँदै भने, ‘भोलीपल्ट ताल सफर गराइयो, ताल घुम्दै गर्दा हाम्रो डुङ्गा पनि उनको डुङ्गा नजिकै थियो।’
२०१७ सालको पोखरा। उनी अर्थात् तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइ।
नेपाली काँग्रेस कास्कीका तत्कालीन सभापति लीलाभक्त आचार्य ती दिन सम्झँदै थिए। चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइ आफ्नो नेपाल भ्रमणको क्रममा पोखरा आँउदा पोखरा अहिलेको जस्तो थिँदै थिएन। फेवाताल थियो, हिमाल थियो, स्वच्छता थियो तर घना बस्ती थिएन।
चीनका प्रधानमन्त्रीको यो नै पहिलो नेपाल भ्रमण थियो। र पहिलो भ्रमणमै चाउ एन लाइ पोखरा आउने भएपछि फेवातालमा नौकाविहार गराउनै पर्यो। ठूलो फलेक राखेर दुईवटा डुङ्गा जोडियो। डुङ्गामा कार्पेट बिच्छ्याइयो।
‘चाउ एन लाइले करिब एक डेढ घण्टा डुङ्गा सयर गरे होला’, लीलाभक्तले सम्झँदै भने, ‘उनी तालबाराही मन्दिर पनि गए, हेरे तर पूजाचाहिँ गरेनन्।’
फेवाताल घुम्दै गर्दा त्यहाँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बिपी, तत्कालीन गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय पनि सँगै थिए। फेवातालको पुछारमा नयाँ बाँध (ड्याम) बन्दै थियो।
‘तपाईंहरुलाई सिमेण्ट बाहिरबाट मगाउनुपर्छ, यत्रो खर्च गरेर प्लेनबाट ल्याउनुपर्छ, ढुवानी गर्ने बाटो छैन, यसो गरेर किन बनाउनु हुन्छ? माटोले नै किन बनाउनु हुन्न?’, चाउ एन लाइको भनाई उधृत गर्दै बिपीले भनेका छन्, ‘त्यसले बढ्ता समात्छ, पहाडको माटोसँग मिल्ने किसिमको हुँदा माटोको बाँधको पकड ज्यादा हुन्छ, सिमेण्टको भयो भने ठूलो बाढी आयो भने टुट्छ।’
बिपीले भनेका छन्, ‘आखिर त्यो प्रमाणित नै भयो, ठूलो बाढी आयो र बाँध टुट्यो, चाउ एन लाइको कुराले मलाई प्रभावित गर्यो, सिमेण्टको औचित्य कायम हुन सकेन।’
त्यसो त बिपी र चाउ एन लाइबीच पहिल्यै चिनजान थियो। २०१६ साल फागुन २३ गते दुई साता लामो चीन भ्रमणमा जाँदा बिपीले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग लामो समय बिताएका थिए। चीनको चिसोमा चाउले बिपीलाई एउटा ओभरकोट उपहारै दिएका थिए। बिपीले त्यो ओभरकोट लामो समयसम्म आफैसँग राखेको उल्लेख गरेका छन्। चीनमा रहँदा चाउले बिपीलाई कम्यूनहरु, इस्पात कारखाना र बेइजिङनेर बन्दै गरेको ठूलो बाँध पनि देखाएका थिए।
करिब २० लाख मानिसले काम गर्दै गरेको दृष्य देखाउँदै चिनियाँहरुले भनेका थिए, ‘हाम्रो नजिकैको बाँध तपाईंहरुलाई देखाउन ल्याएको हो, कसरी आफ्नै प्रयत्नबाट, ठूलो मेसिन प्रयोग नगरीकन हामीहरुले बाँध बनाइरहेका छौँ, त्यो देखाउन ल्याएका हौँ।’
चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइलाई काठमाडौंमा पहिलो पटक स्वागत गरिँदै
भ्रमण टोली रत्नमन्दिर फर्कियो। स्वागतमा गएकै थिए लीलाभक्तहरु। स्वागतजस्तै बिदाईको क्षणमा पनि उनीहरुले चाउ एन लाइलाई फूल दिए अनि हात मिलाए।
‘त्यो बेला चाउ एन लाइसँग हात मिलाउँदा हामीले आफ्ना हात एकदमै नरम भएको अनुभव गर्यौं, साह्रै नरम’, उनले त्यो क्षण स्मरण गर्दै भने, ‘चाउ एन लाइ साह्रै हँसिला, साह्रै नरम तर बिपी बाबुसँग भने हामीले हात मिलाएनौँ, नमस्ते मात्र गर्यौं।’
त्यसबेला माओ पछिका शक्तिशाली चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइ २०१७ साल वैशाखमा नेपाल आएका थिए। आफ्नो पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको निमन्त्रणमा नेपाल आएका चाउ एन लाइको स्वागतमा काँग्रेसी कार्यकर्ता खटिनु स्वभाविकै थियो।
लीलाभक्तले अहिलेसम्म चाउ एन लाइको हातको नरमपन बिर्सेका छैनन्। तर, उनै चाउ नरम मात्र होइनन्, उत्तिकै कडा पनि थिए। पोखराबाट फर्केपछि काठमाडौंमा चाउ एन लाइले आफ्नो नरम हातले टेबुल ठोकेर पत्रकार तर्साएका थिए रे।
दुई तिहाई बहुमतसहितको कांग्रेस सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि बिपी पहिला भारत भ्रमणमा गए, त्यसपछि चीन। चीनमा त्यसबेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङकै जगजगी थियो। तर प्रधानमन्त्री थिए चाउ एन लाइ, जसले सरकारको औपचारिक नेतृत्व गर्थे। चीनमा बिपीले चाउ एन लाइसँग लामो वार्ता गरे र अध्यक्ष माओसँग पनि भेटे। त्यसैबेला चाउ एन लाइलाई नेपाल भ्रमणमा निमन्त्रणमा गरे। चीन र भारतको सम्बन्ध चिसिएको बेला थियो त्यो।
‘त्यस्तो बेला मैले उनलाई नेपाल बोलाएँ, उनी खुरुक्क आए र यहाँ उनको भव्य स्वागत भयो’, बिपीले भनेका छन्, ‘जवाहरलाल नेहरु (तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री) पहिल्यै आएका थिए, उनको स्वागत चाउ एन लाइको भन्दा पनि ठूलो भयो।’
नेपाल–चीनका शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै बिपी र चाए एन लाइ काठमाडौंमा (२८ अप्रिल १९६०)
बिपीका अनुसार चाउ एन लाइले नेपाल आउँदा भारत विरोधी कुरा गरेनन्। सीमा र सगरमाथा सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न चीन–नेपालबीच आयोग बन्यो। र, सबैभन्दा ठूलो कुरा नेपाल–चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा बिपी र चाउ एन लाइले हस्ताक्षर गरे।
सिंहदरबारको ठूलो सभाहलमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरियो। रातीको समयमा भएको पत्रकार सम्मेलन हल भरिभराउ थियो, अन्तर्राष्ट्रिय र भारतीय पत्रकारको बाक्लो उपस्थितिमा बिपीले नै चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको परिचय गराए। प्रश्न सोध्न भनियो।
प्रेस ट्रष्ट अफ इण्डियाका पत्रकारले प्रश्न फाले, चाउ एन लाइलाई उत्तेजनामा ल्याउने गरी।
‘तपाईंसँग त सबैको झगडा छ, नेपालसँग तपाईंको सुलह भयो?’
चाउ एन लाइले भने, ‘नेपालसँग हाम्रो उस्तो समस्या छैन। नेपाल त एउटा सानो मुलुक, हामीसँग यत्रो ठूलो क्षेत्रफल छ, त्यसमा नेपाल जे भन्छ हामी मान्न तयार छौँ। कहीँ सय वर्गमाइल नेपालले लियो भने पनि हामी कम हुँदैनौँ। जमिनको केही टुक्रा यता वा उता पर्नुभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुुरा मित्रता हो।’
पिटीआईको प्रतिनिधीले फेरि पनि त्यस्तै प्रश्न सोधे।
चाउले फेरि भने, ‘मैले तपाईंलाई भनिहालें नि, यो नेपाल र चीनबीचको कुरा हो। हाम्रा लागि त्यो कुनै समस्या नै होइन।’
बिपीले स्थिति नरम पार्न मजाकको शैलीमा थपे, ‘महामहिम, मैले के बुँझे भने हाम्रो सबै क्षेत्रीय मागहरुलाई पूरा गर्न तपाईंले गाह्रो मान्नु हुनेछैन।’
बिपीका अनुसार त्यसपछि चाउ एन लाइले टेबुल ठोकेर भने, ‘मैले बुझेर भनेको छु। यसले हामीलाई के फरक पार्छ? हामी केही वर्गमाइल जमिन तपाईंहरुलाई दिउँला। यसले हामीलाई धेरै फरक पार्दैन। मैले आफ्नो भनाईको अर्थ बुझेको छु।’
लगत्तै चाउ एन लाइ उठे अनि थपे, ‘यसले नेपाल र चीनको मित्रतामा कुनै खलल ल्याउन सक्दैन।तपाईंं भारतीय पत्रकार होइन, कुन प्रेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाईं?’
चाउ एन लाइले यति भनेपछि प्रेसवाला दौडिए टेलिग्राम पठाउन। चाउ एन लाइ भयानक कडा थिए तर उत्तिकै नरम पनि। चीन भ्रमणको क्रममा झण्डै एक दिनभर सँगै बिताएका तथा विभिन्न द्विपक्षीय विषयमा कुराकानी गरेका बिपीले चाउ एन लाइ जस्तो सभ्य र सुसंस्कृत मान्छे कम्ति नै देखेको बताएका छन्।
बिपीले जवहारलाल नेहरु र चाउ एन लाइको तुलना गर्नुपर्थ्यो भने पनि चाउ एन लाइ नै ज्यादा परिस्कृत मानिस लाग्छ भनेका छन्।
प्रकाशित १ असार २०७५, शुक्रबार | 2018-06-15 14:56:26
पोखरा म्याराथनमा गैरआवासीय नेपालीसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ सहभागी
दौडन तम्तयार छ पोखरा!